Weerarkii Al Shabaab oo Dad Shacab ah ku dhintay - Awdinle Online
Weerarkii Al Shabaab oo Dad Shacab ah ku dhintay
April 26, 2020 (Awdinle Online) –Ugu yaraan 5 ruux oo shacaba ayaa ku dhimatay tirro madaafiic ah oo aroornimadii Axada maanta ah laga maqlay qaybo kamida magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sidda ay xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Ilo wareed deegaanka ah ayaa u sheegay Mustaqbal in qaar kamid ah hoobiyeyaasha ay dhimasho iyo dhaawac kasoo gaareen shacab gaar ahaan dad isku qoys ah. Si lamid ah, waxa ay ku dheceen Xero uu ku xaraysnaa Geel badan oo Muqdisho lagu caano teelo.
Daryenta madaafiicda oo la maqlay abaare 7:20 am, xilliga Muqdisho, waxa ay ku kala dhaceen kontarool ciidan, xero lagu xareeyo xoolo Geel u badan iyo guri ay ku nool yihiin dad shacab ah sida uu Mustaqbal u sheegay sarkaan dhanka amaanka ah.
Madfaca ku habsaday kontaroolka ciidanka dowladda ee nawaaxiga xerada Xalane ayaa lasoo wariyey in ay ku geeriyoodeen shan qof oo rayid ah – afar isku qoys ah iyo haweenay waayeel ahayd.
Hoobiyaha ku dhacay xerada Geelle ee ku taala xaafada Tarabuush ee degmadda Wadajir ayaa galaaftay tirro neef oo Geel ah, halka qaarkalana uu dhaawac ka soo gaaray.
Al Shabaab ayaa sheegatay Masuuliyada weerarka waxa Sheegtay Al Shabaab iyaga oo intaasi ku daray in ay bartilmaansadeen Xarada ugu weyn ee Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya.
Ma jiro wax war ah oo ku saabsan duqeyntan oo illaa iyo haatan ay dhacdadaan kasoo saareen lamaaha amaanka Soomaaliya iyo taliska howlgalka Midowga Afrika ee nabad-ilaalinta Soomaaliya.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii sidaan hore madaafiic loogu garaacay xaafadaha ku teedsan saldhiga Xalane, oo fariisin u ah diblumaasiyiinta wadamadda caalamka iyo UN-ka.
Previous articleDhageyso :-Khaad badan oo markale lagu gubay Garow iyo digniin la diray
Next articleCilmi Bare: Cabdinuur: Doorasho Qof iyo Cod Suurtagal Ma Ahan inay Dalka Ka Dhacdo